घर छोडेको दिन र बाको फाटेको चप्पल ! अवश्य पढ्नुस ! नपढे पछुतो हुनेछ ! मात्र २ मिनेट समय दिनुस । – कामना डेली
प्रकाशित मिति २०७५ कार्तिक ५, सोमबार ०२:००
जब म बस पक्रन बस स्टेसन तर्फ लम्किदैँ थिएँ तब मेरो खुट्टामा केहि बिझाएजस्तो भयो । अलि पर पुगेर चप्पल खोलेर हेर्दा केहि च्यातिएको र च्यतियको ठाँउ मा काटि ले खोपी पोड्का को सरो ले बाधी गाठो रहेको थियो र साना साना प्वालहरु पनि थिए । स्टेसनमा कुनै बस नभएकाले मैले त्यहिँ एकछिन बसेर बुवाको पर्स खोलेर हेर्ने निधो गरेँ । पर्समा २० हजारको बिल रहेछ जुन मलाई बुवाले लसाम्सुङ मोबाइल किन्नका लागी ॠण लिएका थिए ।
अनि मैले अर्को कागज पनि भेटेँ जुन एक्स्चेन्ज लेटेर’ रहेछ । बुवाले मलाई ल्यापटप किन्न का लागी आफ्नो बाइक नै नै बेचेका रहेछन् । तब म आफुलाई एकदम कमजोर महशुस गरेँ र आफैलाई सम्हाल्नै सकिन्न । आँखाबाट आँशुका धारा रोकिएनन् । अनि हत्तारिएर घर गएँ र बुवालाई अङ्गालो हालेर भनेँ ‘ बुवा, अब मलाई ल्यापटप चाहिँदैन ।’